Ny marketing amin'ny atiny dia fifandanjana amin'ny fanoratana sy ny famoronana | Martech Zone
Rehefa mandinika lohahevitra momba izany isika Martech Zone hanoratra momba azy, mikaroka momba ny lazan'izy ireo izahay ary koa ny atiny izay efa navoaka. Raha mino isika fa afaka manavao ny lohahevitra ary manampy antsipiriany fanampiny izay fanalahidin'ny lohahevitra - mazàna isika no mandray an-tanana ny fanoratana azy. Raha mino isika fa afaka manazava kokoa ny lohahevitra amin'ny alàlan'ny sary, sary, pikantsary na horonan-tsary aza - dia horaisinay ihany koa izany.
Ohatra tsara amin'izany manaiky Design. Namaky lahatsoratra iray taonina teo izahay - tsy nisy ny tsy fahampiana! Na izany aza, rehefa hitanay fa afaka mamokatra horonantsary manazava izany tsara izahay, lahatsoratra iray izay nanondro ny tombony ananany, ary infografika azonay hizara izay noforonin'olon-kafa… fantatray fa manana mpandresy izahay.
Ny fanosehana anay dia tsy ny hanoratra fotsiny fa ny hizara ny atiny tsara indrindra azontsika atao. Ary raha manaraka ianao Martech Zone on Twitter, Facebook, na amin'ny toeran-kafa, ho hitanao fa mizara atiny an-taonina avy amin'ireo tranonkala izahay izay mifaninana aminay tokoa ho an'ny mpihaino anay. Fa maninona Satria raha tsy afaka manao asa tsara kokoa isika manazava izany, maninona raha manampy lanja amin'ny mpihaino antsika amin'ny fizarana ny atiny mahavariana an'ny hafa?
Raha tsy mahita kodiarana tsara kokoa ianao dia aza mamorona azy… zarao ny tsara indrindra ho an'ny mpihaino anao! Raha afaka mamorona kodiarana tsaratsara kokoa ianao - mandehana! Ny fifandanjan'ny atiny voatahiry sy zaraina miaraka amin'ny atiny noforonina dia hanome vokatra tsara lavitra noho ny atiny noforonina fotsiny. izany Sary torohay avy amin'ny Rebuild Nation manazava ny antony.
Tags: famoronana votoatycurationfifampizarana votoaty